အစားမှားရငျ တဈလုပျ – My Blog
သနျးနုတယောကျ ထငျးစညျးလေးအသာခရြငျး ထနျးပငျပျေါက ထနျးရညျခြိုအိုးတှနေဲ့ အလုပျမြားနတေဲ့ ဦးသိနျးရှကေိုမော့ငေး ရငျး….ဦးလေး ရဆောလာလို့ အမောပွထေနျးရညျတိုကျအုံးနျော..အေး ခဏစောငျ့အုံးဟေ့”အသံသွသွနဲ့ ဦးသိနျးရှပွေနျပွော တယျ……သနျးနု”တယောကျညက ဗီတီရိုရုံမှာ ကာလသားတှစေုပွီး အောကားကွညျ့နကွေတာကို ဖယောငျးတိုငျဝယျထှကျရငျး ထရံပေါကျကခြောငျးကွညျ့ခဲ့သညျ အသားဖွူဖွူအမြိုးသမီးကို ကပျပလီကွီးရဲ့ လီးကွီးနဲ့ မညှာမတာလိုးနတောကို ခဏလေး ကွညျ့မိခဲ့ခွငျးကစ၍ ညကလညျးအိပျမပြျောခဲ့ တခါမှအတှကွေုံမရှိဖူးတဲ့ ၁၇နှဈရှယျလေးမှိ့ သှေးသားဆူလောငျမူတှေ မွငျ့တတျခဲ့ ရတယျ မကျြလုံးထဲမှာ လီးမဲကွီးကခဏခဏပျေါပျေါလာတယျ သနျးနုရဲ့ ပိပိလေးကလညျး
ဘာကွောငျ့ရယျမသိပမေယျ့ ခံရခကျကွီးဖွဈပွီး အရညျပဈြပဈြလေးတှထှေကျနပွေနျပါတယျ ညကကွညျ့မိခြိနျခဏလေးမှ ရခု ထနျးပငျရိပျအောကျရောကျသညျထိ သနျးနုနရေထိုငျအဆငျမပွေ ရလေညျးဆာနပွေီဖွဈတာမှိ့. ဦသိနျးရှဆေငျးအလာကို မော့ကွညျ့ လိုကျခြိနျမှာတော့….သနျးနုရငျထဲ မီးစထိုးထညျ့လိုကျသလိုဖွဈသှားရပါတော့တယျ…အကွောငျးကတော့ ပုဆိုးတိုတို အတှငျးခံမပါ ပဲ ထနျးပငျပျေါကဆငျးလာတဲ့ ဦးသနျးရှရေဲ့ ဧရာမ လီးကွီးက တနျးလနျးကွီး မလေးနဲတာကွီး မဟုတျဘူးလို့ သနျးနုတှေးမိပမေဲ့ မကျြလုံးအစုံကတော့ မခှာနိုငျခဲ့
အောကျက ပိပိလေးကလညျး ယားလာလိုကျတာ ထမိနျကွမျးလေးအပျေါကနေ သနျးနုလကျနဲ့ သူကိုယျတိုငျတောငျသတိမထားမိ ပဲ ဖိအုပျမိနတေယျ ဦးသိနျးရှအေောကျရောကျလာတော့ သနျးနုရော့ ဒီမွအေိုးလေးတှပေါ သယျသှားပွီး ငါတဲထဲပိုလိုကျဟာ ငါဟို ဘကျကအပငျတခါထဲတတျလိုကျအုံးမယျ” ဦးသိနျးရှခေထြားခဲ့တဲ့ မွအေိုးလေးတှသေယျပွီး သနျးနုတဲထဲထညျ့ရငျး ထနျးရညျခြိုကို ရဆောဆာနဲ့ အတျောသောကျခလြိုကျပွီး ပွနျမယျလုပျပွီးမှ ထနျးလကျမိုးထနျးလကျကာ တဲလထေဲက ကှပျပွဈလေးပျေါခဏ လှဲခြ လိုကျပွီး မခံနိုငျလောကျက ယားနတေဲ့ ပိပိလေးကို လကျနဲ့အသာထိကွညျ့လိုကျတော့ အရညျတှထေပျထှကျနပွေနျပါပွီး ခြှဲကြိကြိ အရညျတှနေဲ့မှိ့ သူလကျဖြားလေးနဲ့ ထိမိလိုကျရငျးကစပွီး လကျ၅ခြောငျးလုံးနဲ့ ဆကျပွီး ပှတျနမေိတာမှ အားရပါးရပါပဲ ဒီလိုအပွုမူ မြိုး အရငျက တခါမှလညျးမလုပျမိ လုပျဖို့လညျး မတှေးဖူးခဲ့ပါ ခုတော့သူလကျတှကေို သူကိုယျတိုငျမရပျနိုငျတော့ဘူးလေ အငျ့ရှူး”
အားး ဟငျ့ဟငျ့” အရညျတှလေညျး အမြားကွီးထှကျလို့နပွေီ ဒါမယျ့ သနျနုပှတျနတောကတော့ ပိပိကို ဖွဲရဲပှတျနခွေငျးတော့မဟုတျ ပါ အရှိတိုငျးလေးကိုပဲ မရပျနားပှတျနမေိခွငိးပါဟာ”သနျးနု ညညျး ဒါဘာဖွဈနတောလဲ ဦသိနျးရှကွေီးအသံကွောငျ့ သနျးနု ဘာလုပျ လို့ဘာကိုငျရမယျမသိတော့ ခါးထိဆှဲတငျထားတဲ့ ထမိနျကိုသာ အတငျးပွနျဆှဲခရြငျး ရှကျရှကျနဲ့ထထှကျပွေးမယျ ဟနျပွငျတော့ ဦ သိနျးရှကေ နအေုံးသနျးနု ဒါရှကျစရာမဟုတျပါဘူး လာထိုငျအုံး ညညျးကို ငါပွောပွမယျလို့ လသေံခြိုခြိုနဲ့ပွောရငျး သနျးနု လကျလေးအသာဆှဲပီး ထိုငျခိုငျးလိုကျတယျ ဒါကသဘာဝပဲ သနျးနုရဲ့ ညညျးကအခု အပြိုစဖွဈပွီဆိုတော့ အသှေးသားက တောငျး တနတေဲ့ သဘောပဲ
အေးဒါကို ညညျးက ဖွညျ့စညျးမပေးရငျတော့ ညညျးခုလိုပဲနမေထိထိုငျမသာဖွဈနမှော လူပြိုသိုးဖာလညျခနြတေဲ့ ဦးသိနျးရှတေ ယောကျ ဖငျယားနတေဲ့ သနျးနုကို လိုးခငျြတာနဲ့ ပါးစပျထဲရှိရာလြှောကျပွောနတေော့သညျ လီးနဲ့အလိုးမခံရငျ မိနျးမရောဂါဘာညာ ထှရောလေးပါးအကုနျလြှောကျပွောလိုကျ သနျးနုအလိုးခံခငျြလာအောငျလညျး စကားတှနေဲ့ဆှလိုကျနဲ့ မနဲကွာလာတော့မှ ကွောကျ ရှကျနတေဲ့ သနျးနုလညျး မရိုးမရှတှဖွေဈလာပွီး ဘယျသူမှမပွောပါနဲ့ သနျးနုကို လုပျပေးပါနျော အမသေိရငျတော့ အသတျခံရမှာ သူမြားတှတေော့မပွောပါနဲ့ဆိုပွီး သနျးနုလညျး အလိုးခံခငျြလာတာကွောငျ့ ပွောမိပွောရာပွောနခြေိနျမှာပဲ ပိုငျပွီဆိုတာ သိတဲ့ဦး သိနျးရှတေယောကျ အလုပျစပါတော့တယျ အဝတျပျေါကပဲ နိုလုံးလုံးလေးတှကေို အားပါးတရ ဆုတျခပြှေတျဆှဲရငျး ထမိနျကိုပါ ခွနေဲကနျခြှတျပွီး သနျးနုကို သူရငျခှငျထဲသှနျးပွီ သနျးနုပေါငျတှခြေဲကားလိုပျရငျး ပိပိကိုညာလကျနဲ့ ပှတျဖွဲကလိ ဘယျလကျနဲ့ သိမျး ဖကျထားရငျး နိုတှေ ဆှဲခပြေါတော့တယျ အတှကွေုံမရှိပမေယျ့ အသှေးသားက အရမျးထနျနတောမှိ့ အရှကျကွောကျကငျးမဲ့ပွီး ဦး သိနျးရှပွေုသမြှမှာ နုရှနရေတာကတော့ သနျးနုပေါ့
အားးဟားးး အမလေးး ဘယျလိုကွီးပါလိမျ အား” တှနျခြိလိမျခြိ ကျောပြံကှေးကောကျနတေုနျးမှာပဲ ဦးသိနျးရှရေဲ့ လကျကလယျကွီး က သနျးနု စောကျဖုတျထဲ တိုးဝငျလာတယျ နာတော့နာတယျ ဒါမယျ့ သနျးနုအံကြိတျခံလိုကျတယျ လူပြိုသိုးကွီးနဲ့ ဖငျနှိုကျစကေးက လညျး ဆရာကတြယျလေ အရညျတှတေအားထှကျပွီးသနျးနု ပွီးခငျြလာတော့ ဦသိနျးရှကေ သနျးနုနဲ့လူခွငျးခှာလိုကျတယျ သနျးနု ကတော့ အရှိမျမွငျ့လာမှ ရပျလိုကျတော့ အူကွောငျကွောငျလေးပေါ့ ဦသိနျးရှအေပွငျခဏထှကျပွီး သေးပေါကျတာပါ ပွငျဝငျလာ တော့ သနျနုရဲ့အပျေါပိုငျးအဝတျတှအေကုနျထပျခြှတျခလြိုကျရငျး သူပုဆိုးကိုပါ ခြှတျခလြိုကျတယျ သနျးနုအဖုတျလေး တငျးခနဲဖဈ သှားရတယျ ဦးသိနျးရှလေီးကွီးက ညကသူကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ ကပျပလီလီးမြိုးကွီး အကွီးကွီး အရှညျကွီး ဒီကွားထဲ လီးမှာက အဖုအဖု တှအေမြားကွီးပဲ ဒီအဖုလေးတှကေ ဂျေါလီလို့ချေါတယျ သနျးနုရဲ့
မိနျးမတှကေောငျးအောငျ ငါအသားနာခံပွီးထညျ့ထားတာ ဦးသိနျးရှပွေောပွပမေယျ့ သနျးနုကတော့နားမလညျပါ ကွောကျစရာကွီး ဆိုတာပဲ သိပါတယျ ၁၇ဆိုသျောလညျး လုံကွီးပေါကျလှ နုထှားမှိ့ အယျကနြတေဲ့ နိုတှနေဲ့ ကောကျမောကျနတေဲ့ တငျသားတှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သနျးနုရဲ့ နိုတှကေို တလုံပွီးတလုံ စို့ပါတော့ နို့ဆို့ခံရတာကွီးကို သနျးနုမကွိုကျပါ အသဲယားစရာကွီး သူတကိုယျ လုံးကို နတျဝငျပူးနသေလိုကွီးဖွဈစလေို့ပါ စဖုတျထဲက အရညျတှစေီကနြတော ဘယျလောကျမြားလညျး သနျးနုမသိပါ ဒါမယျ့နိုစို့ခံ နရေခြိနျမှာပဲ သူဖငျကွားကတော့ ရစေီးမွောငျးလို အရညျတှအေသှနျကွနတောတော့ သူသိနတေယျ တျောတျောပါတော့ မနေ တတျဘူး အားးယားယားတယျ အား” အောကျကစဖုတျကို တခကျြတခကျြ ဦးသိနျးရှရေဲ လီခေါငျးကွီးက လာခှနေ့ပွေနျတယျ သနျး နုဘာမတှေးမိတော့ပါဘူး ဒီအခြိနျမှာ သူသိတာ ညကကွညျ့ခဲ့ရသလို သူခံခငျြတာပဲသိပါတော့တယျ ဒါမယျ့ခုထိ သိနျးရှကွေီးက မ လုပျသေး စိတျမရှညျတော့တာကွောငျ့ ဦးလေး လုပျပါတော့ သနျးနုလညျး ပွနျရအုံးမယျလေ” ကဲကောငျးပွီဒါဆိုလညျး ငါကညညျး နာမှာဆိုးလို့ အခြိနျဆှဲပွီး နှူးနတော” အာ့လုပျတာနာတယျလား အေးပေါ နဲနဲတော့ အစပိုငျးနာတာပေါ့” အိုနာလညျး ကွိတျခံမယျ အရမျးကွာနရေငျမကောငျးဘူး မွနျမွနျလုပျတော့နျော”
ဒါဆိုလညျးပွီးရော” ဦးသိနိးရှလေညျး ခကျြခငျြးပဲ စဖုတျ ဝလီးတပွေီး ဖိခလြိုကျတာ အရညျရှဲပွီး လကျနဲ့လညျးအပေါကျခြဲထား တော့ တဝတျလောကျတခါထဲ ဆိုကျဝငျသှားတော့သညျ သနျးနုမှာတော့ အသကျပါပါသှားပွီ ထငျရလောကျအောငျပဲ စဖုတျအုံမှ သညျ တကိုယျလုံ ပူရှိမျးပွီး အောငျ့လညျးအောငျ့ နာလညျးနာမှိ့ မကျြရညျပါတောကျတောကျကသြှားရတော့သညျ သိျု့သျောအသံ တော့ အှနျ့”ဆိုတာလေးပဲ ထှကျနိုငျသညျ နောကျထပျ ကနျြနတေဲ့ တဝတျကိုပါ ထပျဖိခလြိုကျပွနျတော့ မအျောပဲ မရတော့ ၉လကျမ လောကျရှညျပွီး အကွီးကွီးဖွဈနတေဲ့ လီးကိုယျမှ ဂျေါလီတှေ နဂါးပတျထားတဲ့လီး တခြောငျးလုံးဝငျသှားတာလေ သပွေီ အရမျးနာ တယျ တျောပွီ ပွနျတော့ ငိုပွီး အတငျရုနျး အတငျးအျောပမေယျ့ လူကောငျထှားထှားကွီးတကျိုယျလုံးသူအပျေါမှာ ဖိထားတယျ လကျ၂ဘကျကိုလညျးခြုပျထားတာမှိ့ သူရုနျးကနျမူက ဦးသိနျးရှအေဖို့တော့ ပိုထနျလာရုံလောကျသာ ဖိခြုပျကဈြနအေောငျဖကျရငျး ဦးသိနျးရှကေတော့ အဆကျမပွတျ တဆုံးထုပျတဆုံးသှနျးနဲ့ ဆောငျ့ဆောငျ့ခနြပေါတော့တယျ သနျးနုလညျး ငယျသံပါအောငျအျောပေါ့
စောကျပတျထဲ လီးအဝငျအထှကျသံက ကွပျတီးနတေဲ့ စဖုတျလေးကို မှ မဆနျ့မပွဲလီးကွီး ပွီးတော့ဂျေါလီတှကွေောငျ့ ပဈြ ဗတှနျ့ အသံကိုစုံလို့ နာရီဝကျလောကျကွာတော့ သနျးနုမအျောနိုငျတော့ မရုနျးနိုငျတော့ သူကိုယျထဲမှာ အငျအားဆိုလို့တစကျမှမရှိတော့ လူ ဟာမြော့နခေဲ့ပွီ တခကျြတခကျြသတိပါလဈလဈသှားသေေးသညျ ဦးသိနျးရှေ လီးကွီးအကုနျဆှဲခြှတျပွီး ပုံဆနျပွောငျးဖို့လုပျ နသေညျ ဒီအခြိနျမှာ လတေိုးတာတောငျ သနျးနုစဖုတျလေးဟာ မခံနိုငျအောငျ စပျနတေော့တယျ မြော့နတေဲ့ သနျးနုကို ဦးသိနျးရှကေ ဝမျးလြှားဆှဲမှောကျလိုကျပွီး ခါးကဆှဲမပွီး လေးကုနျထောကျအနထေားဖွဈအောငျလုပျယူပွီး ထပျလိုးပွနျသညျ သနျးနုမွငျရတာ တော့ သူစဖုတျစီကနေ ပေါငျတှထေိစီးကလြာတဲ့ သှေးမြားသာဖွဈသညျ
ဦးသနျးရှကေတော့ ဒီဆျောလေးအတျောထနျတာပဲလိုပဲတှေးနသေညျ စဖုတျတခုလုံး ကှဲပွဲပီး သှေးတှထှေကျနတောတောငျ ကွိတျ ခံတယျလို့ပဲထငျနသေညျ သူလိုးနကေဖြာသညျမတှလေိုပဲ အပြိုနုနုလေးကို အားပါးတရမညှာတနျးလို့ခနြသေညျ ဗဈြ” ဘှတျဘှတျ သူအကွိုကျလုံး သနျးနုစီက အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ အားး သပွေီ တျောပါတော့ ဟငျ့ဟငျ့ ဦးသနျးရှကေတော့ မတျောနိုငျသေး အားမရ သေး ဖငျပေါကျကိုပါ သထှေးထှေးခလြိုကျ လကျညိုးလကျကလညျပူးထိုးပွီး လကျနဲ့ အဆကျမပွတျအသှနျးထုပျလုပျနပွေနျသညျ လီးကလညျးနားမထား အားရအောငျဆောငျ့လိုး ဖငျပေါကျကိုလညျး လကျနဲ့လိုးပေါ့ ဖငျပေါကျကို ပွောငျးလိုးသေးသညျ ဒါမယျ့ တျောတျောနဲ့ မဝငျတာကွောငျ့ စောကျပတျကိုပဲ အားရအောငျလိုးရငျး လရညျတှပေနျးထဲ့လိုကျတော့သညျ
လိုးပွီး ခဏနားပွီးတော့ ဦးသိနျးရှေ ထနျးရညျအိုးတှထေိမျးပွီး ရှာက သူထနျးလြှကျဖိုသို့ပွနျသှားတော့သညျ ဦးသိနျးရှအေထငျ တော့ ဘာထူးထူးခြားခြားမဖွဈလောကျဖူးထငျခဲ့တာနမှောပါ ဒါမယျ့ သနျးနုမှာတော့ ထတောငျမရပျနိုငျတော့တာကွောငျ့ သူအမေ လိုကျရှာလို့ ညနပေိုငျးမှ ရှာပွနျရောကျ ဆေးရုံပို့ရတဲ့အဆငျ့ထိဖွဈခဲ့ရတယျ ဦးသိနျးရှကေတော့ မဒိနျးမူနဲ့အဖမျးခံလိုကျရပါတော့ တယျ ဒျေါသနျးနုရဲ့ သူငယျဘဝဖွဈရပျမှနျလေးပါကွံခငျးထဲမှာ မိနျးမငယျလေးတှကေို ပွနျပွောပွတာကိုကွားခဲ့ဖူးတာလေး ကိုး ကား၍ရေးလိုကျပါသညျ အားလုံးကြေးဇူးပါ…….N.G
သန်းနုတယောက် ထင်းစည်းလေးအသာချရင်း ထန်းပင်ပေါ်က ထန်းရည်ချိုအိုးတွေနဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ ဦးသိန်းရွှေကိုမော့ငေး ရင်း….ဦးလေး ရေဆာလာလို့ အမောပြေထန်းရည်တိုက်အုံးနော်..အေး ခဏစောင့်အုံးဟေ့”အသံသြသြနဲ့ ဦးသိန်းရွှေပြန်ပြော တယ်……သန်းနု”တယောက်ညက ဗီတီရိုရုံမှာ ကာလသားတွေစုပြီး အောကားကြည့်နေကြတာကို ဖယောင်းတိုင်ဝယ်ထွက်ရင်း ထရံပေါက်ကချောင်းကြည့်ခဲ့သည် အသားဖြူဖြူအမျိုးသမီးကို ကပ်ပလီကြီးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ မညှာမတာလိုးနေတာကို ခဏလေး ကြည့်မိခဲ့ခြင်းကစ၍ ညကလည်းအိပ်မပျော်ခဲ့ တခါမှအတွေကြုံမရှိဖူးတဲ့ ၁၇နှစ်ရွယ်လေးမှိ့ သွေးသားဆူလောင်မူတွေ မြင့်တတ်ခဲ့ ရတယ် မျက်လုံးထဲမှာ လီးမဲကြီးကခဏခဏပေါ်ပေါ်လာတယ် သန်းနုရဲ့ ပိပိလေးကလည်း
ဘာကြောင့်ရယ်မသိပေမယ့် ခံရခက်ကြီးဖြစ်ပြီး အရည်ပျစ်ပျစ်လေးတွေထွက်နေပြန်ပါတယ် ညကကြည့်မိချိန်ခဏလေးမှ ရခု ထန်းပင်ရိပ်အောက်ရောက်သည်ထိ သန်းနုနေရထိုင်အဆင်မပြေ ရေလည်းဆာနေပြီဖြစ်တာမှိ့. ဦသိန်းရွှေဆင်းအလာကို မော့ကြည့် လိုက်ချိန်မှာတော့….သန်းနုရင်ထဲ မီးစထိုးထည့်လိုက်သလိုဖြစ်သွားရပါတော့တယ်…အကြောင်းကတော့ ပုဆိုးတိုတို အတွင်းခံမပါ ပဲ ထန်းပင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ ဦးသန်းရွှေရဲ့ ဧရာမ လီးကြီးက တန်းလန်းကြီး မလေးနဲတာကြီး မဟုတ်ဘူးလို့ သန်းနုတွေးမိပေမဲ့ မျက်လုံးအစုံကတော့ မခွာနိုင်ခဲ့
အောက်က ပိပိလေးကလည်း ယားလာလိုက်တာ ထမိန်ကြမ်းလေးအပေါ်ကနေ သန်းနုလက်နဲ့ သူကိုယ်တိုင်တောင်သတိမထားမိ ပဲ ဖိအုပ်မိနေတယ် ဦးသိန်းရွှေအောက်ရောက်လာတော့ သန်းနုရော့ ဒီမြေအိုးလေးတွေပါ သယ်သွားပြီး ငါတဲထဲပိုလိုက်ဟာ ငါဟို ဘက်ကအပင်တခါထဲတတ်လိုက်အုံးမယ်” ဦးသိန်းရွှေချထားခဲ့တဲ့ မြေအိုးလေးတွေသယ်ပြီး သန်းနုတဲထဲထည့်ရင်း ထန်းရည်ချိုကို ရေဆာဆာနဲ့ အတော်သောက်ချလိုက်ပြီး ပြန်မယ်လုပ်ပြီးမှ ထန်းလက်မိုးထန်းလက်ကာ တဲလေထဲက ကွပ်ပြစ်လေးပေါ်ခဏ လှဲချ လိုက်ပြီး မခံနိုင်လောက်က ယားနေတဲ့ ပိပိလေးကို လက်နဲ့အသာထိကြည့်လိုက်တော့ အရည်တွေထပ်ထွက်နေပြန်ပါပြီး ချွဲကျိကျိ အရည်တွေနဲ့မှိ့ သူလက်ဖျားလေးနဲ့ ထိမိလိုက်ရင်းကစပြီး လက်၅ချောင်းလုံးနဲ့ ဆက်ပြီး ပွတ်နေမိတာမှ အားရပါးရပါပဲ ဒီလိုအပြုမူ မျိုး အရင်က တခါမှလည်းမလုပ်မိ လုပ်ဖို့လည်း မတွေးဖူးခဲ့ပါ ခုတော့သူလက်တွေကို သူကိုယ်တိုင်မရပ်နိုင်တော့ဘူးလေ အင့်ရှူး”
အားး ဟင့်ဟင့်” အရည်တွေလည်း အများကြီးထွက်လို့နေပြီ ဒါမယ့် သန်နုပွတ်နေတာကတော့ ပိပိကို ဖြဲရဲပွတ်နေခြင်းတော့မဟုတ် ပါ အရှိတိုင်းလေးကိုပဲ မရပ်နားပွတ်နေမိခြငိးပါဟာ”သန်းနု ညည်း ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲ ဦသိန်းရွှေကြီးအသံကြောင့် သန်းနု ဘာလုပ် လို့ဘာကိုင်ရမယ်မသိတော့ ခါးထိဆွဲတင်ထားတဲ့ ထမိန်ကိုသာ အတင်းပြန်ဆွဲချရင်း ရှက်ရှက်နဲ့ထထွက်ပြေးမယ် ဟန်ပြင်တော့ ဦ သိန်းရွှေက နေအုံးသန်းနု ဒါရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး လာထိုင်အုံး ညည်းကို ငါပြောပြမယ်လို့ လေသံချိုချိုနဲ့ပြောရင်း သန်းနု လက်လေးအသာဆွဲပီး ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် ဒါကသဘာဝပဲ သန်းနုရဲ့ ညည်းကအခု အပျိုစဖြစ်ပြီဆိုတော့ အသွေးသားက တောင်း တနေတဲ့ သဘောပဲ
အေးဒါကို ညည်းက ဖြည့်စည်းမပေးရင်တော့ ညည်းခုလိုပဲနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေမှာ လူပျိုသိုးဖာလည်ချနေတဲ့ ဦးသိန်းရွှေတ ယောက် ဖင်ယားနေတဲ့ သန်းနုကို လိုးချင်တာနဲ့ ပါးစပ်ထဲရှိရာလျှောက်ပြောနေတော့သည် လီးနဲ့အလိုးမခံရင် မိန်းမရောဂါဘာညာ ထွေရာလေးပါးအကုန်လျှောက်ပြောလိုက် သန်းနုအလိုးခံချင်လာအောင်လည်း စကားတွေနဲ့ဆွလိုက်နဲ့ မနဲကြာလာတော့မှ ကြောက် ရှက်နေတဲ့ သန်းနုလည်း မရိုးမရွတွေဖြစ်လာပြီး ဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့ သန်းနုကို လုပ်ပေးပါနော် အမေသိရင်တော့ အသတ်ခံရမှာ သူများတွေတော့မပြောပါနဲ့ဆိုပြီး သန်းနုလည်း အလိုးခံချင်လာတာကြောင့် ပြောမိပြောရာပြောနေချိန်မှာပဲ ပိုင်ပြီဆိုတာ သိတဲ့ဦး သိန်းရွှေတယောက် အလုပ်စပါတော့တယ် အဝတ်ပေါ်ကပဲ နိုလုံးလုံးလေးတွေကို အားပါးတရ ဆုတ်ချေပွတ်ဆွဲရင်း ထမိန်ကိုပါ ခြေနဲကန်ချွတ်ပြီး သန်းနုကို သူရင်ခွင်ထဲသွန်းပြီ သန်းနုပေါင်တွေချဲကားလိုပ်ရင်း ပိပိကိုညာလက်နဲ့ ပွတ်ဖြဲကလိ ဘယ်လက်နဲ့ သိမ်း ဖက်ထားရင်း နိုတွေ ဆွဲချေပါတော့တယ် အတွေကြုံမရှိပေမယ့် အသွေးသားက အရမ်းထန်နေတာမှိ့ အရှက်ကြောက်ကင်းမဲ့ပြီး ဦး သိန်းရွှေပြုသမျှမှာ နုရွနေရတာကတော့ သန်းနုပေါ့
အားးဟားးး အမလေးး ဘယ်လိုကြီးပါလိမ် အား” တွန်ချိလိမ်ချိ ကော်ပျံကွေးကောက်နေတုန်းမှာပဲ ဦးသိန်းရွှေရဲ့ လက်ကလယ်ကြီး က သန်းနု စောက်ဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လာတယ် နာတော့နာတယ် ဒါမယ့် သန်းနုအံကျိတ်ခံလိုက်တယ် လူပျိုသိုးကြီးနဲ့ ဖင်နှိုက်စကေးက လည်း ဆရာကျတယ်လေ အရည်တွေတအားထွက်ပြီးသန်းနု ပြီးချင်လာတော့ ဦသိန်းရွှေက သန်းနုနဲ့လူခြင်းခွာလိုက်တယ် သန်းနု ကတော့ အရှိမ်မြင့်လာမှ ရပ်လိုက်တော့ အူကြောင်ကြောင်လေးပေါ့ ဦသိန်းရွှေအပြင်ခဏထွက်ပြီး သေးပေါက်တာပါ ပြင်ဝင်လာ တော့ သန်နုရဲ့အပေါ်ပိုင်းအဝတ်တွေအကုန်ထပ်ချွတ်ချလိုက်ရင်း သူပုဆိုးကိုပါ ချွတ်ချလိုက်တယ် သန်းနုအဖုတ်လေး တင်းခနဲဖစ် သွားရတယ် ဦးသိန်းရွှေလီးကြီးက ညကသူကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ကပ်ပလီလီးမျိုးကြီး အကြီးကြီး အရှည်ကြီး ဒီကြားထဲ လီးမှာက အဖုအဖု တွေအများကြီးပဲ ဒီအဖုလေးတွေက ဂေါ်လီလို့ခေါ်တယ် သန်းနုရဲ့
မိန်းမတွေကောင်းအောင် ငါအသားနာခံပြီးထည့်ထားတာ ဦးသိန်းရွှေပြောပြပေမယ့် သန်းနုကတော့နားမလည်ပါ ကြောက်စရာကြီး ဆိုတာပဲ သိပါတယ် ၁၇ဆိုသော်လည်း လုံကြီးပေါက်လှ နုထွားမှိ့ အယ်ကျနေတဲ့ နိုတွေနဲ့ ကောက်မောက်နေတဲ့ တင်သားတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သန်းနုရဲ့ နိုတွေကို တလုံပြီးတလုံ စို့ပါတော့ နို့ဆို့ခံရတာကြီးကို သန်းနုမကြိုက်ပါ အသဲယားစရာကြီး သူတကိုယ် လုံးကို နတ်ဝင်ပူးနေသလိုကြီးဖြစ်စေလို့ပါ စဖုတ်ထဲက အရည်တွေစီကျနေတာ ဘယ်လောက်များလည်း သန်းနုမသိပါ ဒါမယ့်နိုစို့ခံ နေရချိန်မှာပဲ သူဖင်ကြားကတော့ ရေစီးမြောင်းလို အရည်တွေအသွန်ကြနေတာတော့ သူသိနေတယ် တော်တော်ပါတော့ မနေ တတ်ဘူး အားးယားယားတယ် အား” အောက်ကစဖုတ်ကို တချက်တချက် ဦးသိန်းရွှေရဲ လီခေါင်းကြီးက လာခွေ့နေပြန်တယ် သန်း နုဘာမတွေးမိတော့ပါဘူး ဒီအချိန်မှာ သူသိတာ ညကကြည့်ခဲ့ရသလို သူခံချင်တာပဲသိပါတော့တယ် ဒါမယ့်ခုထိ သိန်းရွှေကြီးက မ လုပ်သေး စိတ်မရှည်တော့တာကြောင့် ဦးလေး လုပ်ပါတော့ သန်းနုလည်း ပြန်ရအုံးမယ်လေ” ကဲကောင်းပြီဒါဆိုလည်း ငါကညည်း နာမှာဆိုးလို့ အချိန်ဆွဲပြီး နှူးနေတာ” အာ့လုပ်တာနာတယ်လား အေးပေါ နဲနဲတော့ အစပိုင်းနာတာပေါ့” အိုနာလည်း ကြိတ်ခံမယ် အရမ်းကြာနေရင်မကောင်းဘူး မြန်မြန်လုပ်တော့နော်”
ဒါဆိုလည်းပြီးရော” ဦးသိနိးရွှေလည်း ချက်ချင်းပဲ စဖုတ် ဝလီးတေပြီး ဖိချလိုက်တာ အရည်ရွဲပြီး လက်နဲ့လည်းအပေါက်ချဲထား တော့ တဝတ်လောက်တခါထဲ ဆိုက်ဝင်သွားတော့သည် သန်းနုမှာတော့ အသက်ပါပါသွားပြီ ထင်ရလောက်အောင်ပဲ စဖုတ်အုံမှ သည် တကိုယ်လုံ ပူရှိမ်းပြီး အောင့်လည်းအောင့် နာလည်းနာမှိ့ မျက်ရည်ပါတောက်တောက်ကျသွားရတော့သည် သို့်သော်အသံ တော့ အွန့်”ဆိုတာလေးပဲ ထွက်နိုင်သည် နောက်ထပ် ကျန်နေတဲ့ တဝတ်ကိုပါ ထပ်ဖိချလိုက်ပြန်တော့ မအော်ပဲ မရတော့ ၉လက်မ လောက်ရှည်ပြီး အကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ လီးကိုယ်မှ ဂေါ်လီတွေ နဂါးပတ်ထားတဲ့လီး တချောင်းလုံးဝင်သွားတာလေ သေပြီ အရမ်းနာ တယ် တော်ပြီ ပြန်တော့ ငိုပြီး အတင်ရုန်း အတင်းအော်ပေမယ့် လူကောင်ထွားထွားကြီးတကို်ယ်လုံးသူအပေါ်မှာ ဖိထားတယ် လက်၂ဘက်ကိုလည်းချုပ်ထားတာမှိ့ သူရုန်းကန်မူက ဦးသိန်းရွှေအဖို့တော့ ပိုထန်လာရုံလောက်သာ ဖိချုပ်ကျစ်နေအောင်ဖက်ရင်း ဦးသိန်းရွှေကတော့ အဆက်မပြတ် တဆုံးထုပ်တဆုံးသွန်းနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ချနေပါတော့တယ် သန်းနုလည်း ငယ်သံပါအောင်အော်ပေါ့
စောက်ပတ်ထဲ လီးအဝင်အထွက်သံက ကြပ်တီးနေတဲ့ စဖုတ်လေးကို မှ မဆန့်မပြဲလီးကြီး ပြီးတော့ဂေါ်လီတွေကြောင့် ပျစ် ဗတွန့် အသံကိုစုံလို့ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ သန်းနုမအော်နိုင်တော့ မရုန်းနိုင်တော့ သူကိုယ်ထဲမှာ အင်အားဆိုလို့တစက်မှမရှိတော့ လူ ဟာမျော့နေခဲ့ပြီ တချက်တချက်သတိပါလစ်လစ်သွားသေးသည် ဦးသိန်းရွှေ လီးကြီးအကုန်ဆွဲချွတ်ပြီး ပုံဆန်ပြောင်းဖို့လုပ် နေသည် ဒီအချိန်မှာ လေတိုးတာတောင် သန်းနုစဖုတ်လေးဟာ မခံနိုင်အောင် စပ်နေတော့တယ် မျော့နေတဲ့ သန်းနုကို ဦးသိန်းရွှေက ဝမ်းလျှားဆွဲမှောက်လိုက်ပြီး ခါးကဆွဲမပြီး လေးကုန်ထောက်အနေထားဖြစ်အောင်လုပ်ယူပြီး ထပ်လိုးပြန်သည် သန်းနုမြင်ရတာ တော့ သူစဖုတ်စီကနေ ပေါင်တွေထိစီးကျလာတဲ့ သွေးများသာဖြစ်သည်
ဦးသန်းရွှေကတော့ ဒီဆော်လေးအတော်ထန်တာပဲလိုပဲတွေးနေသည် စဖုတ်တခုလုံး ကွဲပြဲပီး သွေးတွေထွက်နေတာတောင် ကြိတ် ခံတယ်လို့ပဲထင်နေသည် သူလိုးနေကျဖာသည်မတွေလိုပဲ အပျိုနုနုလေးကို အားပါးတရမညှာတန်းလို့ချနေသည် ဗျစ်” ဘွတ်ဘွတ် သူအကြိုက်လုံး သန်းနုစီက အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ အားး သေပြီ တော်ပါတော့ ဟင့်ဟင့် ဦးသန်းရွှေကတော့ မတော်နိုင်သေး အားမရ သေး ဖင်ပေါက်ကိုပါ သထွေးထွေးချလိုက် လက်ညိုးလက်ကလည်ပူးထိုးပြီး လက်နဲ့ အဆက်မပြတ်အသွန်းထုပ်လုပ်နေပြန်သည် လီးကလည်းနားမထား အားရအောင်ဆောင့်လိုး ဖင်ပေါက်ကိုလည်း လက်နဲ့လိုးပေါ့ ဖင်ပေါက်ကို ပြောင်းလိုးသေးသည် ဒါမယ့် တော်တော်နဲ့ မဝင်တာကြောင့် စောက်ပတ်ကိုပဲ အားရအောင်လိုးရင်း လရည်တွေပန်းထဲ့လိုက်တော့သည်
လိုးပြီး ခဏနားပြီးတော့ ဦးသိန်းရွှေ ထန်းရည်အိုးတွေထိမ်းပြီး ရွာက သူထန်းလျှက်ဖိုသို့ပြန်သွားတော့သည် ဦးသိန်းရွှေအထင် တော့ ဘာထူးထူးချားချားမဖြစ်လောက်ဖူးထင်ခဲ့တာနေမှာပါ ဒါမယ့် သန်းနုမှာတော့ ထတောင်မရပ်နိုင်တော့တာကြောင့် သူအမေ လိုက်ရှာလို့ ညနေပိုင်းမှ ရွာပြန်ရောက် ဆေးရုံပို့ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်ခဲ့ရတယ် ဦးသိန်းရွှေကတော့ မဒိန်းမူနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့ တယ် ဒေါ်သန်းနုရဲ့ သူငယ်ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါကြံခင်းထဲမှာ မိန်းမငယ်လေးတွေကို ပြန်ပြောပြတာကိုကြားခဲ့ဖူးတာလေး ကိုး ကား၍ရေးလိုက်ပါသည် အားလုံးကျေးဇူးပါ…….N.G
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အစားမှားရငျ တဈလုပျ